240 Hz High Spurious Frequency Geophone 0.75% Mgbaghara dị ala YB-A006-S
YB-A006-S bụ ụdị nke ziri ezi geophone nke emere ya na teknụzụ a pụrụ ịdabere na ya. Njirimara: -High Spurious Frequency: 240 Hz - Obere ndidi maka nkọwapụta: 2.5% -Okpukpe Ala: ihe na-erughị 0.75% - Nkọwa SG-10 Nkọwapụta Ngwaahịa: Parameter \_ Mode YB-A006-S （20 ℃ Natural Frequency (Hz ) 10 ± 2.5% Coil Resistance (Ω) 350 ± 2.5% Sensitivity (V / m / s) 22.8 ± 2.5% Mmetụta Na Shunt Resistor (V / m / s) —- Damping 0.68 ± 5% ...
240 Hz High Spurious Frequency Geophone 0.1% Mgbaghara dị ala YB-A005-S
YB-A005-S bụ ụdị nke ziri ezi geophone nke emere ya na teknụzụ a pụrụ ịdabere na ya. Atụmatụ: -High Spurious Frequency: 240 Hz - Obere ndidi maka nkọwapụta: 2.5% -Okpukpe Egwu: ihe na-erughị 0.1% - Ejiri SM-24 -Vertical and horizon available Product Specifications: Parameter \_ Mode YB-A005-S （20 ℃ ） Egwuregwu Egwuregwu (Hz) 10 Co 2.5% Mkpuchi Mkpuchi (Ω) 375 ± 2.5% Mmetụta (V / m / s) 28.8 ± 2.5% Nghọta na Shunt Resi ...
100Hz High Accuracy na Stable Signal Output Geophone YB-A003
B usoro geophone nwere obosara uzo di iche iche na uzo di elu. A na-achịkwa ndidi niile n'ime 5%. Ọdịdị eriri igwe abụọ pụrụ iche nke na-eme ka mgbagha dị ala. Akụkụ: Ezigbo nkwụsi ike Ngosiputa ziri ezi na akara ngosi mgbapụta ngwaahịa nkọwapụta: Parameter \_ Mode YB-A003 (20 Natural) Natural Frequency (Hz) 100 ± 5% Coil Resistance (Ω) 1084 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 39 ± 5% Sensitivity With Shunt Resistor (V / m / s) —- Na-ekpuchi 0.42 ± 5% Damping With ...
X usoro geophone kachasị eji mmanụ, nyocha coal, injinia na nyocha mmiri. Atụmatụ: Anụ na a pụrụ ịdabere na sekit na-agbagọ agbagọ na nnukwu oge nkọwapụta Ngwaahịa: Parameter / mode YB-60X (22 ℃) Frequency Frequency (Hz) 60 ± 5% Coil Resistance (Ω) 615 ± 5% Sensitivity (V / m / s) ) 35.5 ± 7.5% Mmetụta Na Shunt Resistor (V / m / s) 30.4 ± 7.5% (3600Ω) Damping 0.508 ± 10% Damping Na Shunt Resistor 0.569 ± 10% (3600Ω) Di ...
B usoro geophone nwere obosara uzo di iche iche na uzo di elu. A na-achịkwa ndidi niile n'ime 5%. Ọdịdị eriri igwe abụọ pụrụ iche nke na-eme ka mgbagha dị ala. Akụkụ: Ezigbo nkwụsi ike Ngosiputa ziri ezi na nrịba ama mgbapụta nke ngwaahịa Nkọwapụta: Parameter \_ Mode YB-60A (20 ℃) ​​Natural Frequency (Hz) 60 ± 5% Coil Resistance (Ω) 940 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 55 ± 5% Sensitivity With Shunt Resistor (V / m / s) —- Na-ekpuchi 0.65 ± 5% Damping With Shun ...
B usoro geophone nwere obosara uzo di iche iche na uzo di elu. A na-achịkwa ndidi niile n'ime 5%. Ọdịdị eriri igwe abụọ pụrụ iche nke na-eme ka mgbagha dị ala. Akụkụ: Ezi nkwụsi ike Ngosiputa ziri ezi na nrịbama mgbapụta nrụpụta Ngwaahịa nkọwapụta: Parameter \_ Mode YB-A020-B (20 Natural) Natural Frequency (Hz) 35 ± 5% Coil Resistance (Ω) 560 ± 5% Sensitivity (V / m / s) ) 32.5 ± 5% Sensitivity With Shunt Resistor (V / m / s) —— Damping 0.60 ± 5% Damping Na Shunt Resistor —— Dist ... Na-echekwa
Ogo 20 buru ibu nke gbanwere Geophone YB-A012-ET
YB-A012-ET emeputara ohuru ma melite geophone. N'iji ya tụnyere YB-10XS, ụdị geophone a nwere nnukwu tilt: ogo 20: Njirimara: Mgbakwunye ndị ọzọ: ogo 20 maka vetikal Ngwangwa dị elu: 250Hz maka ịgbatị bandwidth dị ọcha. Mmekọrịta zuru ezu na GS-32CT geophones Nkọwapụta Ngwaahịa: Parameter / mode YB-A012-ET Natural Frequency (Hz) 10 ± 2.5% Coil Resistance (K) 395 ± 2.5% Sensitivity (V / m / s) 27.5 ± 2.5% Sensitivity Na Ntughari shunt 19.7 ± 2.5% (1000K) ...
14 Hz High Spurious Frequency Ezi Kwụsị Geophone YB-A014
B usoro geophone nwere obosara uzo di iche iche na uzo di elu. A na-achịkwa ndidi niile n'ime 5%. Ọdịdị eriri igwe abụọ pụrụ iche nke na-eme ka mgbagha dị ala. Atụmatụ: Ezi nkwụsi ike Ngosiputa ziri ezi na nziputa ihe ngosipụta nkọwapụta Ngwaahịa: Parameter \_ Mode YB-A014 (20 ℃) ​​Natural Frequency (Hz) 14 ± 5% Coil Resistance (Ω) 375 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 28.8 ± 5% Mmetụta Na Shunt Resistor (V / m / s) 18.2 ± 5% (640Ω) Damping 0.20 ± 5% Da ...
11Hz Nnukwu Ezi Geophone Stable Signal Output YB-A008
A na-ejikarị YB-A008 na mmanụ, nyocha coal, injinia na nyocha vibration hydrological. Akụkụ: Ezigbo nkwụsi ike Ngosiputa ziri ezi na akara ngosi mgbapụta Ngwaahịa nkọwapụta: Parameter / mode YB-A008 (20 Natural) Natural Frequency (Hz) 11 ± 7.5% Coil Resistance (Ω) 580 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 26.5 6% Sensitivity With Shunt Resistor 20.5 ± 6% (2000Ω) Damping 0.39 ± 7.5% Damping Na Shunt Resistor 0.59 ± 7.5% (2000Ω) Mgbagha (%) ≤0.9 Spurious Fr ...